सबै साथीहरुले अनुरोध गरेर उम्मेदवार भएकीले जित्नेमा ढुक्क छुः सुवर्ण श्रेष्ठ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
म ब्यक्तिगत हिसाबाम यौन हिंसाको शिकार चाहि हुनुपरेन। म गैर सरकारी संस्थामा जागिर खार्दै यो पेशमा लागेको हु । सानै देखि निडर थिएँं । त्यसैले कु्नै पनि किसिमको हिंसाको शिकार बन्नुपरेन ।
सुवर्ण श्रैष्ठ महिला भएर पनि बैदेशिक रोजगार जस्तो चुनातीपपूर्ण पेशमा रमाउछिन। उनी असार ३० गते हुने बैदेशिक रोजागर व्याबसायी संघको निर्वाचनमा संयुक्त व्यावासायिक प्यानलको तर्फबाट द्धितिय उपाध्यक्षमा उम्मेदवार भएकी छन। मदिना ईन्टरनेशनल सर्भिसेजको संचलक समेत रहेकी श्रेष्ठसंग नेपालपाटीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप
तपाईको द्धितिय उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी किन ?
श्रेष्ठः बैदेशिक रोजगार ब्यबसायलाई एउटा गर्विलो ब्यबसायको रुपमा स्थापित गर्न , –ब्यबसायीले आफ्नो छाता संगठनका रुपमा संघ आफ्नै हो भन्ने महशुस हुने गरि काम गर्न। ब्यबसायीले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीलाई नीतिगत रुपमै समाधान गर्न मैले उम्मेदवारी दिएकी हुँं।
त्यसैगरि संसोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावित मस्यौदालाई ब्यबहारिक, ब्यबसायी मैत्री बनाउन , बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको जिम्मेवारी र कर्तब्यलाई ऐनमा नै ब्यबस्थापन गर्न राहदानी लिनु अगाडि नै अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न
आबश्यक मुलुकहरुमा बजार प्रबद्दन गर्न सहजताका लागि जब फेयर तथा भ्रमण आयोजना गर्न एजेन्टको ब्यबस्थापन गर्न र यसका बिकृति हटाउन
– विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसंग समन्वय गरि सीप बिकासको तालिम दिने हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो ।
दुई देशबीच श्रम सम्झौता गराउन पहल गर्दै संस्थागतरुपमा घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था ल्याउन पहल गर्न –व्यवसायीहरुको हरेक पहलको साथी बन्न,
सम्पूर्ण महिला ब्यबसायी हरुको सशक्तिकारण का लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।
प्रश्नः बैदेशिक रोजगार पेशागत हिसावमा त्यति राम्रो छाप छोडेको मानिदैन नि ?
उत्तरः यसको केही अवगुण र नराम्रो पक्ष मात्र धेरै बाहिर आाउने गर्छ । राम्रो पक्षको प्रचार नै भएको छैन। त्यसैले यस्तो भएको हो समग्रमा यो राम्रो छ । त्यसैले राम्र कुरा पनि बाहिर आउनु पर्छ भन्ने हो।
प्रश्नः बैदेशिक रोजगार भित्रको महिलाको अवस्था चाहि कस्तो छ ?
उत्तरः यस भित्र हामी पाँंच दर्जन हाराहारीमा काम गछौ। त्यत्रो धेरै उपस्थिति छैन।
प्रश्नः महिलाको चुनौती चाहि के छ यसमा ?
उत्तरः बजार प्रबर्धनका हिसावमा चुनौती छ। थाहा नभएको ठाउमा बजार प्रबर्धन गर्न कठिन छ। अनि सुरक्षाको समस्य छ ।
प्रश्नः यस क्षेत्रमा हुने हिंस, यौन हिंसा आदिको समस्या चाहि कस्तो छ?
उत्तरः महिला भएको कारण अलिकति हेप्ने, चन्दामा दुख दिने, हेपाहा प्रवृृति चाहि छ। तर म ब्यक्तिगत हिसाबाम यौन हिंसाको शिकार चाहि हुनुपरेन। म गैर सरकारी संस्थामा जागिर खार्दै यो पेशमा लागेको हु । सानै देखि निडर थिएँं । त्यसैले कु्नै पनि किसिमको हिंसाको शिकार बन्नुपरेन ।
प्रश्नः व्यवासायीहरुले बाहिर पठाई दिन्छु भन्दै पैसा खाएर दुख दिने गरेको पनि गुनासो सुन्न पाईन्छ नि ?
उत्तरः वास्तविका ब्यबवसायीहरुले त्यसो गर्दैनन् । यसरि बदनाम गर्ने काम विचौलियाहरुको हो । अलिकति समय तन्कन् भनेको बेला पठाउन नसक्नु चाहि सामन्य समस्या हो। तर वास्तविका व्यबसायीबाट भने त्यस्तो हुदैन,
प्रश्नः तपाईलाई कसरि जित्छ् भन्ने लागेको छ ?
उत्तरः म त पहिला नै बाहिर बसेको। तर सबै साथीहरुले आउनुन भनेर आग्रह गरेपछि म उम्मेदवार बनेकी हुँं । उहाँंहरुको नै आग्रहमा उम्मेदवार भएकोले जित्ने कुरामा ढुक्क छु ।